VIH/SIDA eto Boeny: maro ireo mbola tsy mahalala sy minia tsy miraharaha ny fisiany | Région Boeny
Ny 16 desambra 2014, tao amin’ny Tranoben’ny Indostria sy ny Varotra Mahajanga no notolorana fanamarinam-piofanana ireo solontenan’ny mpiasa avy amin’ny Vondron’ireo mpiasa antselika sy ireo avy amin’ny toeram-piasana, rehefa nanaraka fiofanana ho mpanabe olon-tsahala hanentana ny ady amin’ny tsimokaretina VIH/SIDA eo amin’ny tontolon’ny asan’izy ireo.
Iray volana no faharetan’ny fiofanana, ny 18 septambra hatramin’ny 20 oktobra 2014. Atoa Haja Mahandry Razanakoto, mpitsabo sady Lehiben’ny toeram-pitsaboana ny mpiasan’ny orin’asa tsy miankina eto Mahajanga na SMIM (Service Médical Inte-Entreprises de Mahajanga), no nampita ny izany izay nifantoka indrindra tamin’ny fanentanana sy ny fisorohana.
Nambaran’ireo mpanabe olon-tsahala ireo fa tena ilaina ny hanamafisina ny fanentanana ny ady amin’ny VIH/SIDA eny anivon’ny asa satria betsaka ireo mbola tsy mahalala sy minia tsy miraharaha ny fisian’io aretina io. Ao koa ireo teraka ahiahy sy tsy fahatokisana hoy izy ireo sao haparitaka ny tsiambaratelony raha hanaovana fanadihadiana sy fitiliana momba ny Sida ny tenany.
Nanatrika ny lanonana fanolorana fanamarinam-piofanana ny avy ao amin’ny Sampandraharaham-paritry ny Asam-panjakana sy ny Asa ary ny Lalàna sosialy eto Boeny, ny BIT (Bureau international du travail) na ny Birao iraisam-pirenena momba ny asa, ny Kaominina Mahajanga ary ny Faritra Boeny.
Notsipihin’Atoa Christian Ntsay, Tale avy ao amin’ny BIT fa ny fanofanana mpanabe olon-tsahala dia tafiditra ao anatin’ny politikam-panjakana sy ny drafitrasam-paritra hiatrehana ny ady amin’ny Sida nataon’ny Faritra Boeny tao amin’ny hotely les Roches Rouges ny volana may 2014. Nohamafisiny fa ho tohizana ny taona 2015 ny fanentanana araka ny filamatra napetraka hoe Tontolon’ny asa eto Madagasikara manafoana ny fihanaky ny tsimokaretina SIDA.